नेपाली बजारमा कति छ आज सुनचाँदीको मूल्य ? — Sanchar Kendra
नेपाली बजारमा कति छ आज सुनचाँदीको मूल्य ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको भाउ स्थिर रहको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला ९३ हजार ३ सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । हिंजो पनि यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य पनि स्थिर रहेको छ । आज तेजावी सुन प्रति तोला ९२ हजार ८०० रुपैयाँ रहेको छ । हिंजो पनि तेजावी सुन प्रति तोला ९२ हजार ८०० रुपैयाँ रहेको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज चाँदीको भाउमा पनि घटबढ भएको छैन । आज चाँदी तोलाको ११ सय ५० रुपैयाँ कारोबार भैरहेको छ ।
यसैबीच निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर सरकारले यस वर्षको दशैंलक्षित सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको संयुक्त सञ्चालनमा उपत्यका भित्र १० वटासहित थप सहुलियत पसल सञ्चालनको प्रारम्भिक समझदारी बनेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ ।
यस्तै खाद्य र साल्ट ट्रेडिङको सबै आउटलेटमा पनि सहुलियत सेवा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । सहुलियत पसल सञ्चालको निर्णय र मोडालिटी भने सोमबार तय हुने कम्पनीका प्रमुख कार्याकारी निर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए ।
‘खाद्यको पाँच, साल्ट ट्रेडिङको पाँच र केही थप निजी तथा सहकारी साझेदारीमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नेबारे तयारी गरिरहेका छौँ, छिट्टै निर्णय गर्छौं,’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भने । यसका साथै दुग्ध विकास संस्थाले पनि संयुक्तरुपमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न समझदारी हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
सहुलियत पसलका अलवा खाद्य र साल्ट ट्रेडिङबाट यस वर्षको दशैंमा सहुलियत घुम्ती पसल सेवा पनि सञ्चालन गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यस्ता पसलमा नुन, चामल, चीनी, गेडागुडीदेखि खसी बोकासमेत छुट मूल्यमा पाइने छ । गतवर्ष दशैं चाडै भएका कारण भदौ २३ गतेदेखि सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
गत वर्ष उपत्याकामा तीन वटा घुम्ती पसलसहित साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र दुग्ध विकास संस्थाले सञ्चालन गर्ने गरी देशभर ७३ वटा पसल सञ्चालनमा आएको थियो । दशैंअघि सञ्चालनमा आउने सहुलियत पसल छठपछि मात्रै बन्द हुन्छ ।